Ɔhaw 8: ntutummɛ (1-20)
Ɔhaw 9: esum (21-29)
10 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Kɔ Farao nkyɛn, na mama kwan ma ɔne ne nkoa apirim wɔn koma,+ sɛnea ɛbɛyɛ a meyi me nsɛnkyerɛnne yi adi wɔ n’anim.+ 2 Ɛno bɛma wo nso woaka ama wo mma ne wo mmanana ate nea mede yɛɛ Egypt ne nsɛnkyerɛnne a miyii no adi kyerɛɛ wɔn no,+ na mubehu ampa sɛ mene Yehowa.” 3 Enti Mose ne Aaron kɔɔ Farao nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Nea Hebrifo Nyankopɔn Yehowa aka ni, ‘Wobɛbɔ me so dwae akosi da bɛn?+ Ma me nkurɔfo no kwan ma wɔnkɔsom me. 4 Na sɛ wusen wo kɔn na woamma me nkurɔfo no ankɔ a, ɛnde ɔkyena mɛma ntutummɛ aba w’asaase so. 5 Na wɔbɛkata asaase so baabiara, na nnipa renhu fam mpo; na biribiara a asukɔtweaa no ansɛe no a ɛkae no, ntutummɛ no bedi ne nyinaa, na dua biara a ɛrefifi wɔ wuram no, wɔbɛwe.+ 6 Wɔbɛhyɛ w’afi ne wo nkoa nyinaa afi ne Egyptfo nyinaa afi ma, na ɛbɛyɛ biribi a efi bere a w’agyanom ne wo nananom tenaa asaase yi so besi nnɛ, obiara nhuu bi da.’”+ Afei ɔdan ne ho fii Farao anim kɔe. 7 Ɛno akyi no, Farao nkoa ka kyerɛɛ no sɛ: “Enkosi da bɛn na saa ɔbarima yi bɛkɔ so ateetee yɛn?* Ma nkurɔfo no nkɔsom wɔn Nyankopɔn Yehowa no. Egypt asɛe yi, enti wunhui?” 8 Ɛnna wɔde Mose ne Aaron san baa Farao anim, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔsom mo Nyankopɔn Yehowa no. Henanom na wɔbɛkɔ bi?” 9 Na Mose buae sɛ: “Yɛn mmofra, yɛn nkwakoraa ne yɛn mmerewa, yɛn mma mmarima ne yɛn mma mmea, yɛn nguan ne yɛn anantwi na yɛne wɔn bɛkɔ,+ efisɛ yɛrekodi Yehowa afahyɛ.”+ 10 Ɛnna ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ mema kwan ma mo ne mo mma kɔ a, ɛnde na Yehowa di mo akyi ampa!+ Mitumi hu paa sɛ adwemmɔne na mukura. 11 Daabi! Mmarima a wɔwɔ mo mu no nkutoo na wobetumi akɔsom Yehowa, efisɛ ɛno na mubebisae.” Ɔkaa saa no, wɔpam wɔn fii Farao anim. 12 Ɛnna Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Teɛ wo nsa wɔ Egypt asaase so na ntutummɛ mmra Egypt asaase so, na asaase no so afifide nyinaa, nea asukɔtweaa no ansɛe no biara, wɔmmɛwe.” 13 Ɛhɔ ara na Mose teɛɛ ne poma wɔ Egypt asaase so, na da mu no nyinaa, Yehowa maa apuei mframa bɔ faa asaase no so; ɛbɔɔ awia ne anadwo. Ade kyee anɔpa no, apuei mframa no soaa ntutummɛ bae. 14 Afei ntutummɛ no tu baa Egypt asaase no nyinaa so, na wobesum asaase no so baabiara.+ Wɔsɛee ade papaapa.+ Ná ntutummɛ a wɔte saa mmae da, na ɛno akyi nso, ebi amma saa bio da. 15 Wɔkataa asaase no so baabiara maa asaase no so yɛɛ tumm; na wodii asaase no so nhaban ne nnuaba a asukɔtweaa no gyawee nyinaa. Afei, na ahaban momono biara nni dua anaa afuw mu afifide biara so wɔ Egypt asaase nyinaa so. 16 Ntɛm ara na Farao frɛɛ Mose ne Aaron bae, na ɔkae sɛ: “Mayɛ mo Nyankopɔn Yehowa no bɔne, na mo nso, mayɛ mo bɔne. 17 Afei mesrɛ mo, momfa me bɔne nkyɛ me nnɛ nko ara, na monsrɛ mo Nyankopɔn Yehowa mma me na onyi mmusu yi mfi me so.” 18 Enti ofii* Farao anim na ɔkɔsrɛɛ Yehowa.+ 19 Afei Yehowa dan mframa no ani, na atɔe mframa dennen bi bɔe, na ɛtwee ntutummɛ no nyinaa koguu Ɛpo Kɔkɔɔ no mu. Ntutummɛ no baako mpo anka Egypt asaase so. 20 Nanso Yehowa maa kwan maa Farao pirim ne koma,+ na wamma Israelfo no ankɔ. 21 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Teɛ wo nsa kyerɛ soro na esum mmra Egypt asaase so, esum kabii a woso mu a ɛbɛyɛ yiye.” 22 Ntɛm ara na Mose teɛɛ ne nsa kyerɛɛ soro, na esum kabii baa Egypt asaase nyinaa so nnansa.+ 23 Obiara anhu ne yɔnko anim, na obiara antumi ampue nnansa; nanso baabi a Israelfo te no de, na hann wɔ hɔ.+ 24 Ɛnna Farao frɛɛ Mose ka kyerɛɛ no sɛ: “Monkɔsom Yehowa.+ Mo nguan ne mo anantwi nko ara na ɛbɛka ha. Mubetumi de mo mma mpo akɔ.” 25 Nanso Mose kae sɛ: “Wo na wobɛma yɛn* mmoa a yɛde bɛyɛ afɔrebɔde ne nea yɛde bɛbɔ ɔhyew afɔre ama Yehowa yɛn Nyankopɔn.+ 26 Yɛn nyɛmmoa nso bɛka yɛn ho akɔ. Aboa baako* mpo renka ha, efisɛ wɔn mu bi na yebeyi de abɔ afɔre ama yɛn Nyankopɔn Yehowa, nanso gye sɛ yedu hɔ ansa na yebehu nea yɛde bɛbɔ afɔre ama Yehowa.” 27 Na Yehowa maa kwan maa Farao pirim ne koma, enti wampene so amma wɔankɔ.+ 28 Ɛnna Farao ka kyerɛɛ no sɛ: “Fi me so kɔ! Hwɛ na woansi m’anim bio, efisɛ da a wobɛba m’anim no, wubewu.” 29 Ɛnna Mose kae sɛ: “Woaka a mate. Merensi w’anim bio.”
^ Nt., “ayɛ afiri ama yɛn.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ Mose.
^ Anaa “wobɛma yɛanya.”
^ Nt., “Aboa nan.”